Dhawunorodha openSUSE 12.3 + Maitiro ekuigadzirisa? | Kubva kuLinux
Dhawunorodha openSUSE 12.3 + Maitiro ekuigadzirisa?
peterczech | | Kugoverwa
Mhoro shamwari kubva kuDesdeLinux. Pamutemo zvave zvakadaro openSUSE 12.3 kugoverwa kwakaburitswa :). Mune ino posvo ini ndiri kuzokuratidza maitiro ekugadzirisa iyi isina kunaka linux kugovera.. Enda hako.
1 Ndinoitora kupi kubva?
2 Ungaigadzirisa sei?
Ndinoitora kupi kubva?
Makumi matatu nematatu:
Linux shamwari, mushure mekuisa OpenSUSE ini ndinokurudzira iwe:
Dzidziso zhinji pa internet dzinoratidza mirairo inoda kuti Sudo igoneswe. Kuti vazvishandise ivo vanofanirwa kunyora muoni:
Isa mudzi password
Uye zvino nyora
Iko kwazvinoti mushandisi (kwakakwidziridzwa), isa zita rako rekushandisa. Ive nekuchengera zvikuru nequotches mamaki, vadzime uye unyore ivo wega, nekuti kana ikasashanda.
Wedzera Zvimwe Zvekuchengetedza.
Kune izvi isu tinovhura YaST mune edu ekushandisa menyu uye tinoenda kuSoftware> Software Repositories uye ipapo tinosarudza «Wedzera», muhwindo rinowoneka pazasi tinosarudza «Nharaunda Dzakachengetedzwa
Wifi haina kukuziva iwe, zvekuita?
El OpenSUSE kazhinji haina matambudziko newifi. Asi kana mhinduro ikaitika kwauri, zviri nyore kwazvo. Pinda koni uye pinda mukati semudzi seizvi:
su (rova pinda)
nyora password yako (hit enter)
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware (rova pinda uye uteedzere rairo)
Isu tinogadziridza sisitimu uye nekuisa zvakakosha zvakaita sechiedza, java nezvimwe uye nekuwedzera akanakisa ezvinyorwa muOpensuse Pacman na:
Kuisa iwo maficha muOpenSUSE 12.3 chinhu chega chaunofanirwa kuita kuenda ku (Nekingori kadiki pane yako kadhi vhezheni ivo vanoiswa otomatiki):
ZveRadeon HD5xxx uye gare gare makadhi:
ZveRadeon HD2xxx kuburikidza neHD4xxx makadhi:
Intel's zvakanyatso kubatanidzwa nekutadza.
Codecs (iine yakapusa kurodha pasi kurodha uye kuisa):
yeGNOME, XFCE uye LXDE: http://opensuse-community.org/codecs-gnome.ymp
ye KDE: http://opensuse-community.org/codecs-kde.ymp
Zvishandiso zvausingakwanise kupotsa (Unogona kushandisa YaST muGraphic Mode kubva kuApplication Menyu, «Gadza / Bvisa Software»
gimp, k3b, vlc, rar, unace p7zip-yakazara p7zip-rar, opera, chromium, devede, transmageddon, brazier.
Mushure meizvi zvese iwe unofanirwa kugadzirisa neiyi yekuraira mune terminal:
And ready… Nakidzwa neiyi distro uye usakanganwa kupindura
Ini ndinokusiira iwe vhidhiyo yeiyo itsva yakavhurikaSUSE 12.3
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Dhawunorodha openSUSE 12.3 + Maitiro ekuigadzirisa?
Superb gwara. Mune maonero angu uye ruzivo, izvi ndizvo, pamwe naChakra, akanakisa distro kunze uko padanho re64-bit. Inokurumidza, yakasimba uye yakasimba.
x64 Mint inoshanda inova bara.
Ndatenda nemaonero ako :). OpenSUSE ndiyo imwe yeakanakisa 😀
Unogamuchirwa. Yangu kuravira, zuva Chakra rine chishandiso senge Yast, ichave iri yakakwana distro. Zvemhando yayo, Yast ndicho chinonyanya kushamisa chinhu paLinux.
Yakanaka kwazvo Yast, asi huya pane murume asiri iye anonyanya kushamisa kana xD
Ini ndinoda multarch distro. Chikwereti….?
Yakanaka gwara asi zvinotevera zvinoda kutsanangurwa:
Taigona sei kugadzirisa kuti PC haibatanidze neInternet?
Inoti iyo haigone kubatanidza kune server, nokudaro ichivandudza iyo system.
GRUB haizive mamwe masisitimu anoshanda. Dambudziko reGrub rakagara riripo muSUSE.
Iyo 12..2 yaienda chaizvo.Ini zvaizoitika kwandiri kuti ndichinjire kune iyi nyowani?
Pinda YAST uye gadza NetworkManager seye default network maneja pane ako network kadhi. Nenzira iyi iwe unogadzirisa yako network dambudziko sezvo iyo NetworkManager isingavatonge nekukanganisa.
Paunenge iwe uchinge wabatana neinternet neyekutanga zypper yekugadzirisa, ichagadzirisa iro dambudziko reGrub uye nekuisa zvigadziriso.
Pane chinhu chimwe chete.
YeRadeon HD2xxx kumakadhi eHD4xxx, mutyairi wepfuma haashande, nekuti inotsigira inosvika kuXorg 1.12, uye distros yanga ichishandisa vhezheni 1.13 kwemwedzi yakati wandei.
Zvakanaka ivo vanonyatso gadzirisa dambudziko nemutyairi wenhaka aine chigamba sezvavakaita neKernel 3.7. Ini ndinofunga ichave iri nyaya yenguva .. Zvino, iwo emahara madhiraivha emakadhi aya haashande zvakashata nhasi 🙂
Icho chinhu chimwe kutsigira kernel uye chimwe chinhu kutsigira xorg, chinhu chega chinogona kuita chigamba che xorg amd. Saka ini ndinokurudzira kwazvo kuti umire kutenga amd, kana uchizoshandisa Linux. Nvidia zvirinani inoburitsa madhiraivha matsva enhaka nerutsigiro rwematsva uye xorgs, asi kwete amd.
Kusvika zuro, OpenSUSE 12.2 yakashanda zvakakwana paPC yangu. Kubva rimwe zuva kuenda rinotevera ini ndinoisa iyo nyowani 12.3 distro uye kwete chete iyo GRUB isingandizive ini, asi haina kunditendera kuti ndibatanidze neInternet.
Solution: Munzvimbo imwechete yediski uko Suse yaindikonzera matambudziko, ini ndichangoisa Netrunner 12.12. GRUB inondiziva uye ini ndinogona kubatanidza zvakakwana kuInternet, kubva kwandino gadzira izvozvi. Netrunner ndeye kde yandisiri kuzoti iri nani pane SUSE, asi haina kunyanya kuipa futi. Zvinogona kunge zvisiri zvechinyakare seSUSE, asi hazvizondikonzera dambudziko rakawanda futi. Nyaya yakagadziriswa.Nenzira, ini handina kuisa chero mutyairi. Ini ndakangoisa ne OpenSUSE DVD uye pandakapedza kuisirwa GRUB haina kundiziva uye handina kukwanisa kubatana neInternet.
Zvakanaka «Zvekuita mushure mekuisa 12.3» tuto 🙂
imwe yeakanakisa distros andinoziva nekutenda kwaari ini ndaifarira Linux ... zvisinei ini ndinogara naArchLinux hehehe
Vhidhiyo yacho yakanaka \_ o /, ini ndaisaziva akati wandei maKDE matanho anoratidzwa nevhidhiyo ..
Zvakakosha here kugadzirisa? Ndine 12.2 ine KDE 4.10 uye inoshanda mushe….
Ndiri kugadzirisa izvozvi uye ndine kumisikidzwa kumwe chete .. kana ndikapona, ndinokuudza mangwana .. 🙂
Ini ndinogara ndichida kuisa kubva pakutanga kuti ndidzivise yakaipa rolls 🙂
Pakati pegore ra2013 uye nekuisa zvizere mashandiro esisitimu neshanduro imwe neimwe nyowani? Inonzwika prehistoric 😛
Ndinoziva kuti kungoita zypper kwakakwana, asi pane dzimwe nguva zvirinani kuita yakachena kumisikidza pane kugadzirisa matambudziko anogona kumuka panguva yekuvandudza kana gare gare nemamwe mapurogiramu .. Zvese zvinoenderana nekuti chii chinoshandiswa kunyanya. 🙂
Kudhanilodha izvozvi kutsiva Fedora. Iye zvino ndichave Arch + Gecko.
Ndinofara kuona izvo .. Mubvunzo mumwe: Sei uchitsiva Fedora?
OpenSuse ichine dambudziko risingaperi remaraibhurari akaputswa here? Mufaro
Ndave ndakavhuraSUSE mushandisi kubva 11.0 uye handisati ndambove nezvinetso nemaraibhurari.
Handina kumbobvira ndaita dambudziko nezvitoro zvemabhuku. Chandaisatombokwanisa kumhanya ndiwo chaiwo michina. Asi ini ndinayo palaptop uye ini handiipe yakawanda bhora.
Iwe unoisa iyo Virtualbox repo uye dambudziko rakagadziriswa.
Repo yekuvhuraSUSE 11.4, 12.1, 12.2, 12.3:
Mushure me: zypper kugadzirisa
zypper gadza Virtualbox-4.2
Zvakanaka, ndakaedza 12.2 uye haina kundifadza senge mint kde uye munguva pfupi yapfuura ndakaedza netrunner 12.12.1 distro iyo inotanga kuita ruzha asi yainzwa kurema kupfuura mint. Parizvino ndicha shandura mint kde kuti itaridzike senge netrunner. Zvido.
Handizive kana ndanzwisisa asi mhinduro yematambudziko einternet inondipa fungidziro yekuti zvinokundikana.
Kutanga, icho chinyorwa icho openuse chinounza kumisikidza yemahara braodcom madhiraivha. Ndine Laptop ine iyo Hardware uye iwo emahara madhiraivha anoshanda anotyisa mune ese ma distros andakaedza, uye pavanoshanda !!!
Muna 2011 Broadcom yakaburitsa mamwe madhiraivha epamutemo (broadcom-wl) ayo anoshamisa, chinhu chakashata ndechekuti ndeavaridzi, asi ini ndinokuudza, ivo vakakwana uye vari nani kupfuura vatyairi vazhinji vemahara kubva kumatherhe nevamwe vagadziri. Chinhu chakasarudzika ndechekuti iwe unotanga kuda kuve neinternet yekubatanidza nekuti kunze kwekumwe kupindira distros hapana anoisanganisira pane ekuisa discs. Mukuvhura 12.2 ivo vari mune iyo packman repository uye yakanyorwa kune akasiyana kernels ayo openuse anogovera. Muchokwadi, vachiongorora packman, ivo vakatorongedzerwa gumi nemaviri uye tumbleweed vachimhanya neiyo 12.3 kernel.
Ipapo, openuse 12.2 pachayo yakandipa matambudziko nevamwe vatyairi veatheros, angangoita ese madhiraivhi emahara anouya mukernel-firmware package, saka ndipo paunofanira kubata kana zvasvika kune Hardware kunze kwekuwandisa.
Chii chimwe. Inonakidza nzira yekumisikidza Sudo. Kwaive kwekutyisidzira here? Kune wese munhu asati amboedza openuse. Opensuse inounza chaiyo mhuka chishandiso inonzi YaST iyo iri hofori yekudzora nzvimbo, yakakura kupfuura iyo iri mumawindo uye inokutendera iwe kuti uite zvishamiso. Kwete kunyange Ubuntu kana Mint inounza chimwe chinhu chakadai, iwo chete madhakes (Mandriva neMageia) + PClinuxOS inounza chimwe chinhu chakafanana.
Iyo ndiyo yakasarudzika distro iwe yaunogona kuita pasina iyo terminal uye ini ndinoida iyo nekuti inoita kuti iwanikwe kune wese munhu. Ndine Opensuse pane ese makomputa mumhuri yangu nekuti kutendeseka, zvinonetsa kupaza uye hapana anorasika mairi.
Shanduro 12.2 inoshanda chaizvo mushe saka ini ndinosimudzira. Ini ndinofunga kuti inotevera ichava 13.1 kana chimwe chakadai, zvakanaka tichaonana uye kana zvisiri ndichatora iyi nerutsigiro rwegreen (kune avo vanoti ingori mwedzi gumi nemasere)
Ahh, avo vane libreoffice repos, vhiki ino vakakwira kune vhezheni yechina kuitira kana uchifarira uye yakanyatsogadzikana, openuse garandi, (zvakare vanoshanda kwazvo maoffreoffice vagadziri)
Kupera kwekutaura. Kana uchikwanisa, unofanirwa kugadzirisa chinhu cheBroadcom, kuti mumwe munhu aite zvinhu zvaasingatambe asingazive.
Ndatenda pamberi pezve maonero ako, izvo pasina mubvunzo zvinokosheswa (pane izvi isu tiri pano) :).
Nekuremekedza madhiraivhidhi ewifi wifi, ini ndinongopa ruzivo rwepamutemo kubva kune yakavhurikaSUSE peji uye nenzira iyi handina kumbobvira ndave nedambudziko neangu Broadcom bcm43xx wifi. Kwandinoenda kwandinowana ruzivo nderekuti:
Nezve Sudo uye Yast .. Ini ndakaisa iyo Sudo yekumisikidza seichi, nekuti nenzira iyi inogadzirirwa super nekukurumidza pasina kubaya mbeva kubva pano - ipapo nguva dzese :). Nezve Yast, ndinobvumirana newe, ndicho chimwe chezvakanakisa maturusi ayo openSUSE inogona kuva nawo. Zvinongo shamisa.
Kwazisa shamwari 🙂
Ini ndoziva iro gwara nekuti ini ndakambokuudza, mwedzi mishoma yapfuura ndakatendeuka zuva nehafu ndichitsvaga mhinduro kwenyaya yeatheros uyezve, havana kunyatsoratidzwa. Panguva yacho yaive ye12.2.
Izvo zvinoitika ndezvekuti iyo openuse simaki ine hasha kwazvo uye dzimwe nguva inogadzira makakatanwa uye zvisirizvo masisitimu kana iwe wakabatanidza wifi panguva yekumisikidza. (Hazviwanzoitika nguva dzese asi panguva dzinoverengeka zvakaitika kwandiri) Kwete kudaro mu fedora 18, kuti kunyangwe hazvo icho chinomisikidza chinotyisa, pandakatangazve post yekumisikidza yakanga yachengetedza kumisikidza zvakakwana.
Mune maonero angu ndinokurudzira kusagadzirisa iyo Wi-Fi panguva yekumisikidza, pachave nenguva yekuigadzirisa gare gare. Chii icho icho, kwete ese matambudziko nevakadzi vanopihwa neredhiyo uye ndizvo zvandaida kutaura. Broadcom ndiro dambudziko mu80% yematambudziko, asi pane dzimwe nguva nyaya yacho inouya kubva kune rimwe divi.
Opensuse inoshamisa distro, kana zypper ichiita senge isingaperi dzimwe nguva asi inoshanda chaizvo. Ipapo, iyo yakanyoreswa mumapurojekiti mazhinji senge libreoffice uye kde kuti iwe unoida kana kwete, ivo vakavakirwa zvakanyanya nharaunda yekushandisa suse.
Zororo rakakura, rakapararira zvishoma asi iwe unogona kuvaka chidimbu chakashata che distro kana izvo zvakakosha zvanyatsogadziriswa. Izvo zvinoshayikwa muDebian, kuita apt-pinning igehena remhirizhonga, zvirinani synaptic inofanira kubvumidza kubata izvo zvakajeka.
Kunyange zvakadaro, kwaziso
Ini ndinobvumirana newe mune zvese :). Vashandisi havafanirwe kumisikidza Wi-Fi panguva yekumisikidza sezvo ichavhiringidza iyo inosimudza: D. Ini ndinogara ndichiisa zvakananga (ini handina kumbomhanya live mode uye kubva ipapo isa iyo system). Repos inotodarika Debian uye Ubuntu.
Pasina kupokana kuvhuraSUSE ndiyo yakanakisa iripo uye kwete chete ne KDE :), zvakare yakanaka ne xfce, gnome .. Ndinochida.
Kwaziso kuvhuraSUSEro 😀
OpenSuse yakagara ichiratidzika kwandiri seinokurumidza kumisikidza kwese kwese kufarirwa, munhu anogona "kupwanya" zviri nyore kugovera zviripo, izvo zvaindinakira pandakatanga muGNU / Linux. Asi zvagara zvakandichengeta kure pandinotaura mararaibhurari akatyoka, ikozvino ndine Fedora 18 ine Xfce 4.10 uye kare ndakaita partition yeOpenSuse, isu tichaedza iyo KDE nharaunda, Kurodha pasi kugovera. Mufaro
Mushure mekumisikidza uye kutangazve OpenSuse, ini ndaive nematambudziko ekubatanidza kune internet senge mazhinji asi ini ndakaigadzirisa nekuenda kuYast> Network Zvirongwa> Global Zvirongwa uye mune ino tabo inogonesa networkmanager. Nezve grub ndinogona kufungidzira kuti kuiisa iwe unofanirwa kugovera partition kwairi, uye kwete "kupwanya" iyo yaimboiswa system. Mufaro
Mhoro Ferran: Iwe unogona here kunyatso kuve nerinotsanangudza mune rako tsananguro nezve Open Open SUSE? Nezve GRUB, ini ndinodawo kufarira kuverenga tsananguro nezvekuti wakakwanisa kuigadzirisa sei, nekuti ini ndaifanirwa kuisa CD mhenyu uye nekudaro ndakakwanisa kudzorera GRUB, asi hapana kana chinhu zvine chekuita neinternet. Kutenda uye zvakanaka zvese.
Kuburitsa OpenSuse 12.3. Mufaro
Kuti uvandudze pamhepo kuvhuraSUSE 12.3 zviri nyore, unogona kureva ichi chinyorwa:
@chaparral. Chekutanga pane zvese taura kuti ini handisi nyanzvi mune linux uye kuti ini ndiri mushandisi wakajairika. Ndisati ndaisa OpenSuse, ini ndanga ndatoisa Fedora 18 ine Xfce 4.10, pane 715 gig inokwana hard disk, uye pane iyo yandakapa 400 gigs yeFedora; saka ndakasiya chikamu chemahara kufomatiya mazana matatu emadhigiri uye zvishoma kuti ndinyore gare gare. Zano randinokupa iwe kuti uve ne grub kubva pakutanga nderekuti iwe unomisikidza OpenSuse asi kwete pamusoro peimwe inoshanda system, unofanirwa kunge watove wakapa chikamu chayo kana uchiisa, chete nenzira iyi ndiyo grub ichakuziva iwe. Isa zvakare neiyo DVD vhezheni (iyo izere vhezheni). Sezvataurwa pamusoro apa OpenSuse ye "yakasviba" uye muKde haisarudze networkamanager, danho iri raunofanirwa kuita neruoko, ingo tevera iyi nzira. YAST >> Network Zvirongwa >> Global Sarudzo >> uye sarudza pano >> Mushandisi Anodzorwa neNetworkManager. Ndinovimba kuti pasina mutauro wehunyanzvi uchagadzirisa matambudziko ako. Mufaro
Zvakanaka, ini handisi kuwana iyo Network Zvirongwa sarudzo, heh heh. uye ndakarova Yast handizive kutendeuka. Kuve neYast pane mapfumbamwe sarudzo (yakashandurwa muchiSpanish, uye pamwe ndosaka ndisiri kukunzwisisa) zvinoti:
4) Network Zvishandiso
5) Network Services
6) Kuchengetedza uye vashandisi
8) Kupinda, uye
Ini ndapfuura neiyi yese ad nauseam uye ini handina kuwana izvo zvauri kundiudza. Ini ndakaisa OpenSuse kakawanda uye handina kumbobvira ndapinda muchinetso ichocho. Mune inotevera posvo (yekusaita iyi yakareba kwazvo) ini ndinokuudza maitiro andakakwanisa kuisa Suse 12.3.
@chaparral. Hapana munhu anozvarwa achiziva, zvinoitika ndezvekuti GNU / Linux inogara ichivaisa mumutauro weChirungu. Unoenda ku YAST >> Network Zvishandiso (4) >> Network Zvamada >> Global Sarudzo >> uye pano unosarudza NetworkManager. Mufaro
Ndatenda Ferran. Pakupedzisira ini ndasvika pakunzwisisa zvawanga uchindiudza kuti inotevera shanduko kana nzira inotambura:
Yast> Network zvishandiso> Network masetingi> Global Sarudzo> Pano tinotara sarudzo «Inotongwa nemushandisi kuburikidza ne NetworkManager». Ndinovimba uri kutaura chokwadi uye kana dambudziko ramuka ndinogona kuzvigadzirisa. Ndakaona mimwe mirairo yandaishandisa uye haina kundishandira. Kutenda uye zvakanaka zvese.
@chaparral. Chokwadi zuva rega rega tinodzidza chimwe chinhu chitsva, ikozvino tava nezvombo zvitsva zvekutarisana neOpenSuse, sezvandambotaura, taizofanira kugadzirisa kubatana kweInternet neruoko. Mufaro
Zvakanaka Ferran. Ini ndinofunga ichi chinofanirwa kunge chiri chipenga mukugovera icho chichagadziriswa pasina nguva. Ndicho chikonzero nei zvisingakurudzirwe kuisa kugoverwa kuchangobva kuburitswa. Iko kunogara kuri nyore kumirira mazuva mashoma.
@chaparral. Kana iwe watove wafunga kumirira kuti mabugs anogona kugadziriswa, ini ndinokuraira kuti uite saizvozvo usati waisa. Mufaro
Zvakanaka Ferran .. Zvino kana iwe waifanirwa kusarudza pakati peFedora uye kuvhuraSUSE, ndeipi yaunosarudza?
Kwaziso uye hupenyu hwakareba kuvhuraSUSE 🙂
Zvakanaka Ferran, asi dai ndakanga ndazvinyora sezvaunotaura, ndingadai ndisina kuzokumbira rubatsiro rwako kugadzirisa dambudziko, saka iwe ungadai wakaitei neruzivo rukuru rwauinaro nezve OpenSUSE? kugovana navo. Ini ndinofunga zvave zviri nani nenzira iyoyo, handiti? Kutenda uye zvakanaka zvese.
Vanondibvunza kuti ndechipi pane izvo zviviri zvekugovera zvandingasarudze, ndinopindura kuti ini ndakamomesa PC yangu, uye ndaisa OpenSuse zvakare ne KDE, uye handina kubvisa Fedora nekuda kweyakaisirwa, asi nekuti OpenSuse inopa kusangana kwakazara mumatafura avo. Uye ini ndinongova mushandisi ari nyore, asi iwe unofanirwa kudzidza ku "fiddle" nemaitiro, ndosaka paine kudhanilodha kwekugovera, saka kana iwe ukatora system yacho newe, unogona kudzoreredza. Mufaro
Zviri pachena kuti iwe unoda OpenSUSE kupfuura Fedora. Ini zvakare ndinofunga kuti mune nyaya ye kde SUSE yakanyanyisa kukwana. Zvinogona kusanzwanana naFedora. Kunyangwe Netruner isina kushata zvachose, uye kuti kana tikatarisa kuti yakavakirwa paUbuntu, iyo isiri isina nyasha dzayo.
Ini ndinofunga kuti PCliux ine desktop desktop yakaremara, sarudzo yakanaka kana iwe uchida kuyedza KDE, kana dambudziko iri zviwanikwa zvePC. Mufaro
Ini ndichangobva kukwidziridzwa kubva Kubuntu 12.10 64 zvishoma kuVhura Suse. rega tione zvinobuda ...
Hapana chakaipa 🙂
Ndizvozvo, wanga uchitaura chokwadi !!!, mazuva matatu uine OpenSuse 3. Nhanho yekuverenga, ndakaziva iyo Nvidia Geforce madhiraivha achiisa ne12.3 bhatani, KDE 1 nezvose zviri pachena. inoshanda nekukurumidza, ichitsetsenura. Ini ndaifarira Yast, yakakwana kwazvo, ini ndichiri kuiwana. Smooth uye yakatsiga mashandiro….
Yakanaka kwazvo posvo, ini ndaida iyo. Ini munguva pfupi yapfuura ndakaisa Fedora 18 pamwe ne win 7 (ndinoida yebasa) asi kubva kuDVD vhezheni yacho zvaisakwanisika kuiisa, ini ndaigona chete kubva muRarama vhezheni. Kunyangwe ini ndaive ndisina matambudziko nekuvhiya, ini ndakanga ndisingafare kwazvo neiyo partitioning system iyo iyo inosimudza uye yekutanga grub vanayo. Ndiri kuzoisa Suse pakati nhasi nanhasi kuti ndione kuti zvinofamba sei, ndobva ndakuudza kuti zvaive sei = 0).
Mhoro! ndine urombo kuti handina kukwanisa kupindura kare sezvazvaive nekuiswa kweOpenSuse. Iko kumisikidza kuri nyore uye ini ndanga ndisina kana dambudziko kuiisa pamwe ne win7 pane akapatsanurwa mativi. Chinhu chega chakaomarara ndechekuti ndaifanira kumisazve Grub kuitira kuti igone kuisirwa win7 asi nerombo rakanaka yaive yakapusa futi, muchokwadi, kumisikidza kwakasiyana kunogona kuitwa kubva kune imwechete desktop.
Chinhu chandisinganzwisise ndosaka zvisingaite kugadzirisa uye / kana kuisa akati wandei zvirongwa panguva imwe chete.
Zvese zvimwe zvinoshanda zvakanaka uye ini ndoda iyo KDE desktop inouya nayo.
Mhoro .. Ndiri kufara kuti zvese zvakafamba zvakanaka kwauri :).
Kana iri yekuiswa kwemapakeji .. Unogona kuisa akati wandei mapakeji pasina matambudziko kubvira pakutanga iwe uchitsvaga uye sarudza ese software anokufarira wobva waipa kuti ishandise (mune iyo yekuwedzera / kubvisa zvirongwa nzvimbo) kana iwe unogona shandisa iyo terminal muchimiro che zypper yekuisa program1 program2 program3 nezvimwe.
Kwazisai Carolina uye nakirwa yako yakavhurikaSUSE: D
Ndatenda zvikuru nemazano.
Iwe unoziva kuti ini ndakatanga linux kosi uko kwatinozoshanda nekudzidza naDebian. Pandakaudza mudzidzisi kuti ndirikushandisa openuse 12.3 akandiudza kuti ndishandure ndive Fedora 15 nekuti inoshandisa iyo imwecheteyo tsanga kana kuti iyo tsanga haina kukurira 3.x. Pane musiyano wakawanda kwazvo pakati peimwe kernel neimwe yekuchinja distro uye vhezheni?
Zvakanaka, hapana misiyano .. Iyo kernel iri kumberi kusimukira (kukura) mukuenderana neyakagadzirwa nyowani inowedzera madhiraivha uye zvigamba pamwe nekuvandudza mashandiro .. Ini handinzwisise zvisina maturo zvemudzidzisi wako kubasa .. Gara mune yako yakavhurika uye rega mudzidzisi adzidze asati ataura zvisina maturo zvakadaro :-). Iwe unogona kutaurira mudzidzisi nerunyararo rwepfungwa pasi rose kuti Debian Squeeze yave kuda kuchinjwa naDebian Wheezy (vhezheni yayo nyowani ine zviputi zvishanu kuti zvigadziriswe ... kureva kuti, muvhiki imwechete kana maviri ichaburitswa ) uye yakaverengerwa kernel 12.3 😀
petercheco, maita basa nemhinduro dzenyu, dzinobatsira = 0).
Ndakataura nemudzidzisi zvakare tikabvumirana kuti zvirinani kuisa Fedora 18 uye kumhanyisa Debian 6 yakagadzirirwa makirasi anoshanda.
Ndakaverenga yako yekunonoka saka ini ndatobvisa OpenSuse uye ndakaisa Fedora 18, saka ikozvino ndichaenda kune Fedora yekumisikidza post, heh!. Ndinovimba kugara neiyi distro inguva ye loooong nekuti kubvira pandakatenga kabhuku (kanopfuura mwedzi 1) ndinofunga ndakaisa uye kuyedza nezve 8 distros, hehe.
ona kana iwe uchida kuisa Fedora, sarudza iyo KDE vhezheni yeiyi .. Ini ndakatama kubva kuGnome kuenda ku KDE Fedora yangu sezvo iri yakagadzikana kupfuura iyo Gnome vhezheni .. Iyo yekumisikidza yakafanana, ingo usaisa iyo Gnome mapakeji ..
Ini ndinokusiira iwe yakakurudzirwa kurongedzwa:
Isu tinovhura iyo terminal uye tinopinda mukati semudzi:
yako midzi password
Zvino sezvo Java yakaiswa nekusarudzika tichaisa flash:
Zvechiedza tinoenda kune adobe flash peji uye sarudza iyo YUM vhezheni yeLinux. Isu tinoenderera nekuvhura uye ichaiswa otomatiki.
Kamwe iyo repository yawedzerwa, isu tiri kuzowedzera / kubvisa zvirongwa, tsvaga flash uye maka adobe flash.
Isu tinoshandisa shanduko.
Iye zvino tinowedzera izvi RPMFusion repository:
Iye zvino isu tinowedzera iyi ATRPMS repository:
Isu tinodhawunirodha mapakeji anoenderana neyedu yekuvakisa uye nekuaisa nekaviri tinya.
Iye zvino tave kuzoisa repository yekutanga mutyairi kuti uve nechokwadi chekugadzikana kwesisitimu yako. Nechinangwa ichi pane package yum-plugin-zvinokosheswa (vanoiisa kubva kune yekuwedzera / kubvisa zvirongwa pakati).
Kana tangoiswa, isu tinongofanirwa kugadzirisa iyo
kukosha = N.
Iyo yakakurudzirwa yekumisikidza ndeiyi:
fedora, fedora-inogadziridza… zvakakosha = 1
RPMFusion uye adobe… kukoshesa = 2
Mamwe maRepo senge maatrpms… kukoshesa = gumi
Kuti tikwanise kugadzira iyi shanduko isu tinofanirwa kuve nemidzi mvumo saka isu tinovhura terminal uye tinyore:
Dolphin yakavhurwa iwe uye iwe unogona kuenda kunzira iyi uye kugadzirisa kuti unwe.
Iye zvino isu tinogona kugadzirisa iyo system nekuvhura iyo terminal zvakare uye typing:
Iye zvino tava kukwanisa kuisa maitiro edu pasina matambudziko kuchengetedza system yedu yakasimba.
Zvishandiso zvausingakwanise kupotsa (tinoisa nekuwedzera / kubvisa zvirongwa):
yum -y kuisa p7zip rar unrar vlc gimp qt-rekodimydesktop filezilla libreoffice libreoffice-kde libreoffice-langpack-en
yum -y bvisa caligra *
Nezvo isu tine yedu system yakagadzirira kushandiswa.
Kana iwe uchida skype iwe unogona kuitora pane iyi link:
Kuti uve nebhokisi rebhokisi nenzira iri nyore, tora repo yeFedora uye ukopike kune iyo folda: /etc/yum.repos.d/
Hechino chinongedzo kurodha Fedora 18 KDE:
chaizvo ndave kutanga kukwazisa nekutenda
Pindura kuna nico
Chinhu chega chakaiswa muChirungu, saka unofanirwa kuchigadzirisa
Hugo Nogueira akadaro
Kwazisa shamwari Peter. Mudzidzi wako anotaura newe kuti utaure 🙂 Regai ndikuudzei kuti ndinoda iyo Gnome vhezheni kupfuura KDE, mairi ini ndisingakwanise kugadzira icon yakapusa isina kuisanganisa padesktop, asi hei, ndiwo maonero angu. Wese munhu anotsutsumwa nezveGnome3 asi kusvika parizvino haina kundipa dambudziko. Zvandinokumbira ndezvekuti zvakakosha kuchinja kuita 12.3 .. Uchaona kekutanga pandakaedza OpenSUSE yaive ne12.2 uye yakandipa dambudziko rakawanda, sezvo yainonoka kutanga uye dzimwe nguva haina kutanga nekuda kwe kukanganisa pamwe nemutyairi kadhi yemifananidzo (ndinofunga). Ndine OpenSUSE 12.1 disk uye "tadan!": Zvinoitika kuti zvinotanga mumasekondi makumi mashanu uye zvodzima mumasekonzi matanhatu, uye handina kumbonzwa kubva kukadhi iro rinogona zvakare…. Ndosaka ndichitya kuenda ku5 🙁
Pindura Hugo Nogueira
Semutemo wechigumwe kune vasiri-tekinoroji kana vashandisi vehunyanzvi, kana zvisina kukosha kugadzirisa, USAWEDZESE.
Zviripachena neimwe yega vhezheni yesoftware, ingave kernel kana mamwe masisitimu ehurongwa kana chero chishandiso senge internet browser, hofisi suite kana odhiyo inoridza, pane zvitsva maficha zviripo pamwe nezvinogadziriswa matambudziko _zvakanaka_pano pane matambudziko matsva kare nguva dzakare matambudziko akamutswa.
Izvo iwe zvaungaite kuyedza 12.3 pane iyo Live Live (CD kana pendrive) uye uone mashandiro ayo, kana ikashanda nemazvo iwe unofanirwa kungoita backup yekuparadzanisa kwawakaisa yako yazvino yekushandisa system uye wozoisa 12.3 chinyararire. Zviripachena kana iwe uine nzvimbo yekuchengetedza pane rako diski iwe unogona zvakare kusarudza kuisa 12.3 pachikamu chitsva.
tarisa maonero angu zvakanyanya kana zvishoma zvinowirirana nerondedzero yandinokusiira msx, asi ndinogona kutaura kubva pane zvakaitika kwandiri kuti vhezheni 12.3 ndakaiisa kunyangwe mavhiki maviri pamberi pekumisikidzwa zviri pamutemo iri rc uye ini handina kumhanyisa mune chero dambudziko, izvo zvakaitika 12.1 na12.2, saka ndinokurudzira kuti uzviedze pane livecd uye wozogadziridza pasina kutya.Zvino, kana iwe uine yekare ATI graphic kadhi, usaise chero yevanotyaira mutyairi nekuti vhezheni 12.3 haienderane neyekare yeATI legacy driver .. Naizvozvo chengeta madhiraivhi emahara anoshanda chaizvo nhasi uye iyo nyowani kernel 3.7.10 inoshanda chaizvo mushe :). Iwe unozoona mutsauko mukuita kwakawanda kunyange nehurongwa iine chete gig yegondohwe uye uone kuti ini ndine KDE yakaiswa: D.
Jojooooo! Iwe unoti vatyairi vese veIntel Wifi vanoshanda ... Ehe hongu, ndakaedza paDell Inspiron 640m neIntel Wifi uye inoshanda zvisingaite pasina matambudziko (zvinonetesa kuti ibatanidze kunetiweki) ... Asi wozoiisa paGateway 200-ARC zvakare ne Intel Wifi uye hapana chinoona iyo isina waya kadhi, kunyangwe ini ndinoita uye kuita kuti switch ishandiswe asi yakafanana ... Ndakaedza iyo yekupedzisira rairo uye yakandiudza kuti rairo haina kuwanikwa ... Chii chimwe chandingaite kuti chishande ???
Heino iwe mutyairi wako Intel wifi ... iyo Intel PRO / Wireless modhi yakakosha.
Zvinoitika shamwari ndezvekuti iwe waifanirwa kuisa pasuru iyo suse inodiwa iyo isingasvike nekukanganisa mu kde kuti ugone kushandisa iwo murairo uyo shamwari yedu yakaisa ipapo. Iwe unofanirwa kuedza «Sudo zypper mu b43-fwcutter» uyezve shamwari yedu yekuraira 🙂
Ndatenda kwamuri mese ... Ini ndatoona nenzira yakaoma kuti iyo firmware yeelis isipo ... ndakabatana netambo uye ndakatanga kutarisa munzvimbo dzekuchengetera ndikaiwana ndisati ndaona izvi asi chimwe chinhu chakaitika nekuti modem yangu handigone batanidza ... Inogara mu «Mvumo Inodiwa» dialog uye icon inoramba iri mutray ine kiyi ... .. Uye chimwe chinhu chinoshamisa nekuti kune mamwe ma modem kana ndichigona ...
Inogona kunge iri bhagi yeiyo gnome keyring, edza kuibatanidza neyast zvakananga panzvimbo pemaneja weneti.
Oo uyezve chimwe chinhu… Chandinofungidzira kuti SUSE yekumisikidza chikanganiso… NeCHROME kekutanga pandinoivhura, inoshanda zvakakwana, asi kana ndikaivhura zvakare ndisingatangise ndinowana tambo yekuraira neimwe Chromium Kero Tafura Yakashata. … Ndiri kutaura chokwadi here nekuda kwekukanganisa kwekuisikidza? Izvi zvakaitika kwandiri muGateway iro muverengi weDVD aisaverenga, uye muDell zvese zvinomhanya kunge pasina ...
Iwo maratidziro ndeaya:
-> Gateway 200ARC: Pentium M processor (Centrino) 1.5Ghz 1Mb-L2 400Mhz-FSB, Samsung 512Mb DDR266 RAM, 40Gb IDE Samsung disk (kwete yekutanga nekuti yakanga yakanganisika), Pioneer DVD / CDRW combo, Intel 82855 Chipset, Sigmatel Audio STAC9752, Wireless Calexico 2 / Intel PROSet
-> Dell Inspiron E1405: Core2Duo 1.83Ghz 2Mb-L2 667MHz-FSB processor, Kingston 3Gb DDR2-800 RAM, Fujitsu 60Gb SATA7200 disk (secondary disk yandiri kuyedza nayo), Philips Super-Multi DVD + RW, Intel GM945 Chipset, Sigmatel Audio STAC92XX, isina waya Intel 3945
Zvakaipa zvakare ... Chero ... Zvakanaka, chimwe chinhu chokubvisa kana kuchengetedza SUSE kubva pakudzikira pasi?
Uye nei ndisingatore iyo SUSE logo ??? 🙁
chinja mushandisi wako mushandisi: https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
Ok uye nekunonoka sei? Ngatitarisei kana iyo SUSE logo yave kuoneka… ..
Chingave chinhu chakadai.
Mushandisi wemushandisi anoenderana nesisitimu yekushandisa yaunoshandisa
en about:config kune injini yekutsvaga (yepamusoro bar), tsvaga general.useragent.override, tinya shandura uye unamate kodhi yandaisa pamusoro 😀
Mhoroi, iguru rinotungamira :), ndinovimba munogona kundibatsira, ndine dambudziko. Pandinodzvanya pane yemushandisi menyu uye zvakare ndinodzvanya pane marongero (zvese izvi mu openuse 12.3 ine gnome 3.7) iyo inotora inoratidza kuti chimwe chinhu chiri kurodha, kwemasekondi mashoma inogara seizvi asi pachinzvimbo chekuratidza masetingi skrini ine mitsetse diagonally uye panguva iyoyo ini handigone kushandisa chero zvinongedzo uye ndinogona kungodzima iyo pc nebhatani remagetsi, ini ndaive nedambudziko rakafanana ne fedora 18 uye ndaigona kuzvigadzirisa nekuchinja iyo grub boot sarudzo ndichishandisa imwe kernel, yatove kuti fedora iyi yakatanga nekernel 3.8 uye yakandikonzera makakatanwa, ndakaichinja kuita 3.6 uye dambudziko rakanyangarika. Ini ndaida kuita zvimwe chete mukuvhura asi iyi distro ine kernel imwe chete, 3.7.
Chero mazano kana rubatsiro? ndapota: 9
Kusvika parizvino zvinongoitika chete pandinoita izvo kana ndiri mugnome shell kwenguva yakareba asi ndinogona kuvhura zvimwe zvinoshandiswa uye iko kukanganisa hakuitike kwandiri.
Pindura kuna jos
zvakanaka nekukasira kuvhuraSUSE inoshandisa iyo kernel-kukundwa uye ndiyo inomira kupa aya matambudziko sezvo isina kugadzirirwa yako system.
Saka kana iwe uine desktop desktop kana laptop isa iyo kernel-desktop:
Uye dambudziko rako richagadziriswa :).
Kana iwe ukaona kuti zvinoitika zvakare, isa iyi package zvakare:
Izvo zvakanaka kwazvo kwandiri nekuti inguva yangu yekutanga kuisa openuse kune yangu pc, asi ini ndichiri kuda kuisa iyo inotyaira thanks.
Isa yakavhurika Suse asi haibatanidze iyo Internet asi kana iyo network network ikaonekwa, ini handizive kuigadzira, ndinokutendai nekutsanangura kuti sei uye kana zvichikwanisika kuziva kuti pane bhuku remanyorero, maita basa.
Hechino gwara rekumisikidza iyo Network Manager mune yakavhurikaSUSE. Iri ndiro gwaro repamutemo:
Yakapihwa Kanotix2013 ine Steam isati yaiswa